Ahoana ny fianarana milomano?
Ny fahafahana milomano dia tena manan-danja tokoa ho an'ny olon-dehibe - indraindray ny tsy fahafahana mijanona ao anaty rano dia afaka mitaky fiainana. Azonao atao ny mianatra ny fomba hialana amin'ny toerana tsara, satria ny fisian'ny teknolojia milomano dia omena ho an'ny rehetra.
Ahoana no hianaranao hilomano tsara?
Ny olona rehetra dia hianatra hilomano, raha afaka mahay ny fahaiza-manao fototra araka izay tratrany araka izay azo atao izy, ao anatin'izany ny fialana voka-tsoa, ​​ny fahafahana mandainga amin'ny rano ao amin'ny vavony sy ny lamosiny, mihodina eo ambonin'ny rano, manokatra ny masony eo ambany rano, mitazona ny toerana misy ny vatany ary manetsika tsara ny sandriny sy ny tongony.
Ny fanafody mandritra ny tondra-drano dia tanterahana amin'ny vava miaraka amin'ny loha nasondrotra na nivadika. Ny fahasarotana ateraky ny mpilomano dia ny mifofotra ao anaty rano, satria Mitaky ezaka izany. Ny rivotra dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fihetsikan'ny tanana sy ny tongotra.
Mba hianatra hilomano haingana dia mila mahafantatra tsara ny fomba fiasa amin'ny tongotrao ianao. Ny fitsipika manan-danja indrindra ho an'ny ankamaroan'ny lamaody - kofehy tokony hohazaina, ary fihetsika - haingana sy haingana. Rehefa mipetrapetraka fotsiny ny tongotra "tavy rongony" dia maka toerana iray izay sahala amin'ny sahona.
Zava-dehibe ho an'ny milomano sy ny fanenjehana. Mba hilomano haingana kokoa, mila miara-mikambana ny rantsan-tànanao ianao, ary ny hadisoan-dalan'ny fanombohana dia ny mitazona ny rantsan-tànanao.
Fahadisoana iraisana hafa koa, fa ny mpilomano mandefitra sasany dia miezaka manandratra ny lohany ambony noho ny zavatra takiana. Na izany aza, miaraka amin'ny toerana misy azy, mihintsana ny tongotra, ary mihamalemy haingana ny hozatry ny sandry sy ny soroka.
Fihetsika ho an'izay mianatra milomano
Hanampy ny fahaiza-manao amin'ny kilasy manokana momba ny fandokoana. Alohan'ny hanombohan'izy ireo, dia tokony halefa amin'ny tany mandritra ny 10-20 minitra.
Mankanesa ao anaty rano, mandehana ary mihazakazaka amin'ny lalana samihafa, mamely ny sandry (2-3 minitra).
Mipetraha ao anaty rano miaraka amin'ny lohanao ary asio fofona ho an'ny fotoana faran'izay azonao (5-7).
Mipetraha ao anaty rano ary miezaha miaina, mitazona ny tavanao ao anaty rano (5-7).
Angony ny rivotra, atsangano ny fofonao, ary asao ny vatana, ataovy ao anaty rano. Rehefa manosika anao hivoaka ny rano dia mijoro amin'ny tongotrao ary manafaka (in-4-5).
Ajanony ny rano ao amin'ny vavanao, maninjitra ny tananao amin'ny lalana samihafa, mitazàna ny fofonao. Avy eo miezaka ny milomano, manindry ny tananao amin'ny vatanao ary manao fihetsika amin'ny tongotrao (5-6 min.).
Mitsangàna miatrika ny sahona, atsangano ny tananao ary ampifanaraho amin'izy ireo. Manaova fofona lalina, atsipazo eny amin'ny rano (5-6 min.). Aorian'ny 2-3 andro, dia asio ilay fanazaran-tena amin'ny alàlan'ny fanaintainana ao anaty rano mandritra ny fivoahana.
Mankanesa ao anaty rano mankany amin'ny lalina kely eo ambonin'ilay tavy, maka rivotra ary mihazona izany, avy eo dia mamelatra ny tananao sy ny tongotra ary mametraka ny lamosinao amin'ny rano (5-7 minitra).
Avereno atao ny laharana faha-6, fa misorata eo amin'ny rano, fa tsy ao amin'ny vavanao, fa eo an-damosinao. Andramo ny hampiditra ny asan'ny tanana sy ny tongotra (5-7 minitra).
Mandritra ny fialana amin'ny kibo, araho amin'ny hetsika ny tongotrao, miezaka ny milomano metatra vitsivitsy, ary asio ny hetsika amin'ny tanana (5-7 min.).
Ahoana no hianaranao mitsambikina rano?
Ny mianatra milomano ao anaty rano dia tsara indrindra any anaty dobo filomanosana. Atombohy amin'ny fampiofanana amin'ny rano miaraka amin'ny loha. Andramo ny manokatra ny masonao, ataovy fohifohy maharitra. Mariho fa amin'ny fotoana mety, dia tsy misy fahatsapana rano mandatsaka ao anaty orona.
Rehefa mahatsiaro maimaim-poana ianao, manomboka manofana ireo hetsika havanana. Atsaharo ny sisintany ary atsofoka ao anaty rano, miezaka ny manao ny kely indrindra amin'ny hetsika sy ny tanana tongotra - ilaina ny mamonjy oksizenina.
Mety hipoitra ny fahasarotana rehefa misondrotra ambany rano noho ny fahatsapana hafahafa vokatry ny tsindry amin'ny rano. Ny ambany dia atahoranao, ny matanjaka kokoa dia ny fanerena amin'ny tendrom-barotra ary mety hiteraka aretina ianao. Mba hanamorana ireo fahatsapana ireo, alohan'ny hanidinana, manaova fofona sy fofona lalina vitsivitsy. Ary raha mihaino ny sofinao ianao dia manodina ny oronao ary miezaka ny manafatra azy.
Mianara milomano - tsy ilaina akory ny fahaiza-manao. Ankoatra izany, ny rambony dia mandrisika ny rafi-panafody, manatsara ny fiasan'ny rafi-panafody, manamafy ny fahasalamana ary manampy amin'ny fandoroana fanampiny pounds.
Mandritra ny fanatanjahan-tena
Ireo lamaody eo ambanin'ny akanjo lava
Sakona miaraka amin'ny tànana
Ny tsy fahombiazan'ny volana
Salak - sakafo mahandro
Pancreatin tamin'ny fitondrana vohoka
Tena mahagaga ireo zavatra 35 ireo ka tsy fantatra hoe nahoana izy ireo no mbola tsy misy na aiza na aiza?
Ny sakafo frantsay amin'ny 14 andro - sakafo
Salope salady miaraka amin'ny tongolo lay
Jamba natao tamin'ny hoditra mena ho an'ny ririnina
Ahoana no hanamboarana omelety mahasalama?
Sugis Mastic amin'ny tanan-tanana - recipe